(Daawo)-Bandhig Shaqeedki Labaad oo Garowe Lagu Qabtay | Puntland
(Daawo)-Bandhig Shaqeedki Labaad oo Garowe Lagu Qabtay
Bandhigaan shaqooyinka oo ah kii labaad ee lagu qabto magaalada garoowe ee caasumadda Puntland ayaa waxaa iska kaashaday madbacadda daabacaadda scansom iyo shirkadda Somali sms Jobs,waxaana ka soo qeyb galay dhammaan shirkadaha,warshadaha,iyo hay’adaha shaqaale raadiska ah,mas’uuliyiin ka socday golayaasha dowladda Puntland,aqoonyahano,marti sharaf iyo dhalinayo dhaqadoon ah.
Bandhigaan ayaa looga golleeyahay isku xirka shirkadaha shaqaale-doonka iyo dhalinyarada shaqa-raadiska ah,waxaana shaqooyinka la soo bandhigay kala ahaayeen kuwa ku xiran shahaado waxbarasho iyo kuwa kale oo ku xiran xirfadaha gacanta laga qabto.
Maxamuud Maxamed oo ku hadlayey magaca qabanqaabiyaasha bandhigaan kana tirsan madbacadda daabacaadda scansom ayaa ugu horrayn faahfaahiyay hanaanka shaqooyinka loo soo bandhigayo.
Maxamed xassan Saleebaan oo ka tirsan shirkadda Somali sms Jobs ayaa dhalinyarada badan ee shaqo-raadiska ah ku dhiiri geliyay in ay shaqa abuur hindisaan halkii ay shaqaale noqon lahaayeen,maadaama aan dhalinyarada oo dhan hal mar xafiis wada fariisan karin.
Ugu dambayn wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga dowladda Puntland ,cabdiraxmaan Xassan Yuusuf ayaa si rasmi ah u furay bandhigaan.